“Kungani abafana bengahlolwa ubunsizwa babo?” | Scrolla Izindaba
“Kungani abafana bengahlolwa ubunsizwa babo?”
Iqembu labesifazane abasebasha e-Tsakane, e-Kurhuleni, lihlale lihlolwa ubuntombi balo njalo ngenyanga ukufakazela kubazali ukuthi baseyizintombi nto – kodwa izishoshovu zendawo ziyayingabaza le nto.
Njalo ekupheleni kwenyanga, izintombi ezigqoke ubuhlalo zibonakala zihamba futhi zicula emigwaqeni.
Isishoshovu somphakathi uRefiloe Charmaine uthe, lokhu kufanele kuvinjwe ngoba lo mkhuba udalelwe ukuqinisekisa indlela esiphathwa ngayo emphakathini.
“Lokhu angeke kulunge. Abesifazane abancane abenza lo mkhuba abavunyelwe ukungena nomakhalekhukhwini babo ukugwema ukubonwa ezinkundleni zokuxhumana noma babe nabangani ngaphandle kweqembu,” kusho yena.
Esinye sezikole eziningi ezisetshenziswa kule ndawo yi-Ebuhleni be Zintombi Cultural Centre. UVeliswa Manki wesikole uthe, amantombazane asemancane afundiswa ukuhlonipha imizimba yawo.
“Sibafundisa ukuthi baziphathe kanjani njengabesifazane abasebasha, neqhaza labo emphakathini, ezocansi nakwezinye izinto eziphathelene nabesifazane,” kusho uManki oneminyaka engama-74.
“Sibhekene nokukhulelwa kwentsha ezweni ngoba abesifazane abasebasha baqala ukuya ocansini ukuze badlulise isikhathi. Abaqondi ukuthi bazifaka kuphi njengoba baze bazithole sebekhulelwe.”
Ngokubakhuthaza ukuthi bahlale beyizintombi nto, uManki uthe bayokwazi ukuqala ukuya ocansini sebekhulile futhi sebenesibopho.
Kodwa uManki uthe, sezehlile izibalo zamantombazane afunda esikoleni sakhe.
“Sikhathazekile ngokuthi kungenzeka ukuthi abanye sebelahlekelwe ubuntombi babo futhi siyesaba ukuthi kungenzeka kutholakale lokhu. Siyethemba akunjalo,” kusho yena.